Otu mbu nke Baotou Steel nke rails 5,000 bu ihe ruru “igwe ojii” - China Foshan Hamis Steel
Ogbe mbu nke Baotou Steel nke rails 5,000 ruru ahia "igwe ojii"
Na abali abuo nke onwa mbu nke onwa ahia mbu nke ulo ahia nke Baotou kwuru na ugbo mbu nke ulo oru ahu, nke bu rails 5,000 nke ritere ahia ahia “igwe ojii” nso nso a, nke gosikwara na okporo igwe Baotou Steel gbagoro na “igwe ojii” n’otu oge.
Baotou Steel dị na Baotou City, Mongolia dị n'ime. Ọ bụ otu n'ime ihe mbụ ígwè ulo oru bases wuru mgbe a tọrọ ntọala nke New China. Inwe ụlọ ọrụ abụọ edepụtara, "Baogang Iron and Steel Co., Ltd." na "Baogang na-adịghị ahụkebe Earth", ọ bụ otu n'ime isi ụgbọ okporo ígwè na-emepụta ihe na China, otu n'ime ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na-enweghị ígwè, na nnukwu ụlọ ọrụ mmepụta ihe na North China. Ọ bụkwa mmalite na nke kachasị ukwuu nke ọrụ ụwa dị obere. Nchọpụta sayensị na ụwa nke dị obere.
Dị ka okwu mmeghe si dị, nke dị iche na usoro ahịa ọdịnala, nke a bụ nke mbụ ngwongwo ígwè nke Baotou Steel rere site na National Energy e-shopping mall.
National Energy e-ịzụ ahịa nnukwu ụlọ ahịa bụ naanị B2B vetikal onwe ejikwara e-azụmahịa n'elu ikpo okwu n'ime National Energy Group. Ọ na-agbakwunye ọnụahịa, ajụjụ ọnụahịa, ọnụahịa ọnụahịa, yana ụlọ ahịa na usoro ịzụ ahịa kọmputa, gụnyere ihe ndị metụtara n'ọtụtụ azụmaahịa dịka kol, ụgbọ njem, na ume ọhụrụ. Chazụta na ijere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nkeji 1,400 nke National Energy Group.
Isi mmalite gọọmentị na-egosi na n'oge na-adịbeghị anya, Baotou Iron & Steel butere ụzọ na mkparịta ụka okporo ụzọ e-commerce dị n'ụdị okporo ụzọ na ngalaba dị mkpa nke mpaghara njem nke National Energy e-shopping mall, wee banye nkwekọrịta ịzụta ihe, wee bụrụ onye mbu so ahia di na ebe ahia ahu. Nkwekorita a kpuchitere ụlọ ọrụ ụgbọ oloko niile dị n'okpuru National Energy Group, na okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè Baotou Steel nke dị arọ, okporo ụzọ ndị a kpochapụrụ, ụgbọ ala ndị na-adịghị ahụkebe na ngwaahịa ndị ọzọ enwegoro nke ọma.
Otlọ ọrụ Baotou Steel Group kwuru na iji ngwa omimi nke atụmatụ "Internet" nke mba ahụ, otu a ga-arụsi ọrụ ike ịkwalite ahịa dị iche iche nke igwe nchara. (Emecha)